Ahoana ny fomba hanehoana ny daty sy ny andro amin'ny herinandro ao amin'ny menio | Avy amin'ny mac aho
Ahoana ny fomba hanehoana ny daty sy ny andro amin'ny herinandro ao amin'ny menio
Safidy iray ananantsika amin'ny Mac anay ny manampy na mamafa ny daty sy ny andro amin'ny herinandro ao amin'ny tsipika menio. Ireo safidy ireo dia tena mora ny manova sy manampy antsika raha misy toerana kely ao amin'ny menio mba hahavitana kely ny zavatra rehetra na mifanohitra amin'izay, raha mila mahita ianao fampahalalana bebe kokoa momba ny daty sy ny andro amin'ny herinandro aiza isika.
Amin'io lafiny io dia tsy mila manasarotra ny fiainantsika amin'ny fampiharana an'ny antoko fahatelo misy isika ary tena tsara, hahita ny daty sy ny andro miaraka amin'ny fotoana. Ny safidy dia maromaro ary azontsika atao mihitsy aza ny manafoana an'io fampahalalana io amin'ny toerana iray nampiasana azy, ka andao hojerentsika ny fomba hanaovana azy.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny miditra amin'ny sehatr'asa ary noho izany dia mankany amin'ny Taratasy rafitra. Rehefa miditra ao dia miditra Daty sy ora ary eo isika dia tsy maintsy mikitika ny takelaka farany ambony, amin'ny Hijery:
Amin'ity takelaka ity dia hitantsika eo ambany ny safidy roa fanahafana ny daty:
Asehoy ny andro amin'ny herinandro
Asehoy ny daty
Raha ny tena izy dia asehon'ny Mac antsika amintsika ny ora fa tsy misy zavatra hafa, saingy misy an'ity toerana kely ity azafady mba hahazoantsika aina kokoa ny mahita ny andro amin'ny herinandro miaraka amin'ilay daty. Misafidy ny hanandrana izahay ary izay ihany. Azo antoka fa maro aminareo no efa nahalala an'io safidy io, fa ho an'ireo vao tonga ao amin'ny OS X dia mety ilaina izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fomba hanehoana ny daty sy ny andro amin'ny herinandro ao amin'ny menio
Ny fampiharana Tonality dia havaozina amin'ny kinova 1.4.1
Nohavaozina ny lalao World of Tanks Blitz ho an'ny OS X